Ezigbo ihe kpatara 4 iji gbalịa emegheSUSE 12.1 | Site na Linux
4 ezigbo ihe kpatara iji gbalịa emegheSUSE 12.1
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Nkesa, GNU / Linux, Ndị ọzọ
Nyaahụ anyị na-ekwuwa ọpụpụ nke OZI 12.1, na saịtị ọgụgụ taa m na-agakarị, achọtara m isiokwu na-adọrọ mmasị TechWorld.com.
Ọ na - eme na ha hapụrụ anyị ihe ha kpọsaa dị ka «Ezigbo ihe kpatara 4 iji gbalịa emegheSUSE 12«, Nke bụ kpomkwem na, gị si ele ihe mere na ndị ọrụ kwesịrị na-agbalị ọhụrụ a version nke openSUSE.
Ana m akọrọ gị (ntụgharị nke m) isiokwu:
1 1. Enyele 4 desktọọpụ nhọrọ:
2 2. Emeghari ngwugwu na ngwa emelitere:
3 3. Teknụzụ na-akpata:
4 4. Ugbu a na ejiji, ma ọ bụ kama: Na ígwé ojii:
5 Kedu ihe m chere n’onwe m?
1. Enyele 4 desktọọpụ nhọrọ:
Ọ bụ ezie na ha hapụrụ mgbalị iji gbalịa itinye Ịdị n'Otu, ha gụnyere akwụkwọ akụkọ ahụ Gnome 3 na mbipute a.
En OZI 11.4 nhụchalụ nke Gnome 3 ee, mana na ụdị a enwere ọtụtụ ọrụ ọhụụ, nhọrọ, ndozi. Dịka ọmụmaatụ, nkwado maka obere ihu, ọkwa ka mma, yana ịhazi ntọala akaụntụ ntanetị.
Ọ bụrụ na ịchọghị Gnome3, ị ga-enwe nhọrọ mgbe niile KDE, dị ugbu a na ụdị a KDE 4.7. Ma ọ bụ ezie na arụmọrụ ndị na-adịbeghị anya dịka nhọrọ niile maka Tablet etinyebeghị, enwere ike iji ya na ngwaọrụ ndị a na-enweghị nnukwu nsogbu. Maka nsụgharị ọzọ nke distro a, ha ga-etinye aka na mmelite niile nke KDE maka ngwaọrụ emetụ.
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ndị ọrụ OpenSUSE nwekwara ike iji Xfce o Lxde.
2. Emeghari ngwugwu na ngwa emelitere:
Dị ka ọ dị na mbụ, a na-etinye mmemme ọhụrụ na nke ọhụrụ, dịka ọmụmaatụ Firefox 7, Ebibi 7, FreeOffice 3.4.3, Ederede 1.4, Banshee 2.2, chromium 17 so na gọọmentị repos… na ọtụtụ ndị ọzọ.
3. Teknụzụ na-akpata:
A na - enye mmelite na ọtụtụ akụkụ teknụzụ nke sistemu, dịka ọmụmaatụ ọ gụnyere Nri maka njikwa mbipute faịlụ, sistemụ iji mee ka sistemụ malite ngwa ngwa, na mgbakwunye, ọ malitere iji asụsụ mmemme Google: Go
4. Ugbu a na ejiji, ma ọ bụ kama: Na ígwé ojii:
Dabere na kernel Ihe ngosi Linux v3.1, Ugbu a openSUSE dị njikere ịgba ọsọ na Amazon EC2. Agụnyere ngwa ọrụ iji megharia ikike dị ka Xen 4.1, KVM, na Virtualbox. OpenSUSE bu nke mbu ahoro iji tinye aka na ikuku gburugburu ebe obibi.
Ebe nchekwa maka nke a na-enyekwa nke kachasị ọhụrụ nke Eucalyptus, OpenNebula, na OpenStack.
Kedu ihe m chere n’onwe m?
Ruo ugbu a naanị Snapper dọtara uche m, echiche ahụ dị oke mma. Were ya na ị kwalite sistemụ gị, ọ na - eme ka OS ghara ịmalite nke ọma, were ya na gburugburu desktọọpụ kwụsịrị ịrụ ọrụ, jiri Snapper anyị nwere ike "ịlaghachi na oge" ma hapụ sistemụ anyị dịka ọ dị tupu nwelite ahụ. Amaghị m banyere gị mana ọ bụ n'ezie oke atụmatụ.
Ihe ndi ozo adighi ka ihe obula site na uwa ozo ... Ana m eche uzo nke ngwa a adighi adi ohuru (Ana m eji ya Arch, ọ bụ inyefe...), Achọghịkwa m igwe ojii kọwaa okwu ahụ, achọghị m echiche nke enweghị ike ijikwa 100% faịlụ m ma ọ bụ ozi m, yana gburugburu desktọọpụ abụghị ihe na-emeghe naanịSSS, ọtụtụ distros ndị ọzọ na-enye nke a na ndị dị otú ahụ otu oge 😀
Ọ dịghị ihe ọbụlagodi na nke ikpeazụ, gbalịa ụdị ọhụrụ a nke openSUSE, egbula m site na njirisi m, gbalịa onwe gị ka emechaa: You nwere ike ị nweta nkwubi okwu gị 😀
Nzaghachi na see okwu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » 4 ezigbo ihe kpatara iji gbalịa emegheSUSE 12.1
Ihe 14 kwuru, hapụ nke gị
eme 10 afọ
Enyele 4 desktọọpụ nhọrọ
Onweghị ihe nkesa ndị ọzọ enweghị. Fọdụ nwere ike ịbụ karịa oge karịa ndị ọzọ, mana ha niile nwere nhọrọ ndị ahụ.
Ngwa ọhụrụ na ngwa emelitere:
Naanị ihe o kwuru. Eleghi anya Debian enweghi ihe ohuru n'ime ngalaba ule, ma o nwere ike inwe ha na Experimental or Sid.Ma Arch, Ubuntu (site na enyemaka nke PPA ha), na nkesa ndi ozo dikwa n'oge.
Ihe na-akpata teknụzụ:
Nke a nwere ike bụrụ isi ihe na-atọ ụtọ. Mana ọ bụrụ na m chọrọ ịkụcha nkà na ụzụ, m na-eji Fedora.
Ugbu a na ejiji, ma ọ bụ kama: Na thegwé ojii
Enwere m otu njirisi dịka onye ọrụ ibe m. Anaghị m atụkwasị obi na data m dị na sava.
Ọ bụ eziokwu na Snapper dị oke mma, ndị ahụ bụ ihe a na-enwe ekele n'ezie, mana ọ bụghị ya mere m ga-eji hapụ Debian iji openSUSE. Echere m, na nkenke, ha enyebeghị m otu ihe mere m ga-eji.
Zaghachi na elav <° Linux
N'ezie, ndị «Ugbu a na ejiji, ma ọ bụ kama: Na thegwé ojii»Ọ bụ aka onwe onye HAHA, na isiokwu na Bekee ọ naghị ekwu ọbụna remotely na LOL !!!
Zaghachi KZKG ^ Gaara <"Linux
obi ike dijo
Yast na-amasị m, karịsịa maka ndị ọhụrụ na DVD na-enye gị ohere ịwụnye desktọọpụ niile
Zaghachi iji obi ike
Ọ bụ eziokwu na YaST dị ukwuu. Ọ bụ otu n'ime ihe ole na ole masịrị m banyere openSUSE.
N'ezie ọ dị ezigbo mma, ọ bụrụ na ọ dị ndụ, m na-anwale ya, n'ihi na n'oge ahụ enwere m Fedora 16, Mint 12 na Windows 7 (ị maara mgbe nwanne m nwanyị gwara m, anaghị m aghọta windo gị, ebe ọ bụ ụlọ ọrụ ahụ , na ọ bụ ezie na m na-akọwa ya, ọ na-agwa m: ọ siri ezigbo ike ») na na eriri, ọ bụrụ na echere m na m chọrọ ịnwale ya, ma ọ bụrụ na m nwee obi ụtọ, ọ bụrụ na m kwaga mint maka oge (Fedora anaghị ahapụ m hahaha)
Zaghachi nye mac_live
Obi ike <º Linux dijo
OpenSUSE dị ka Fedora karịa Mint, anaghị m eji ya (anwale ee) na m ga-ekwudị na ọ dị mfe karịa Fedora
Zaghachi iji obi ike <º Linux
Ọfọn, n'ezie ma ọ bụrụ na m budata suse mepere emepe gara aga mana na kọmputa m gara aga, ọ chọghị ịrụ ọrụ nke ọma n'ihi na amataghị vidiyo vidiyo nke ọma, mana m ga-anwa ọzọ ịnwe ya, ọ bụrụ na anyị nwere ike inye ya ohere na diski ike.
Carlos were dijo
M arụnyere ya wee nwaa ya (KDE), Na-achọ ihe ọzọ maka ịdị n'otu na Gnome 3 na ahụmịhe ọhụụ. Ekwesịrị m ikwupụta na abụ m onye hụrụ n'anya n'anya Deb, yana enwere m nsogbu mgbe niile na rpm. Ahụmahụ m dị na HP DM4. Ọ dị mma, ngwaike ahụ rụpụtara nke ọma maka m nke na enwere m mwute maka Ubuntu. Onye njikwa ike ahụ dị ukwuu, batrị were ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ karịa Ubuntu. Mana ihe a niile diri obere. Njikọ ọnụ na ngwa Gnome bụ nke nwụrụ, ọkachasị Gnucash. The YaST installer na-ewe oge ndụ ya na njedebe, amaara m zypper mana enwere m mmasị n'echiche nke ịhọrọ ọtụtụ ngwa dịka m na-eme na synaptic. Ma na YaST nke a dị nwayọ nwayọ. Na iwepụta ya ọ dị m ka nnukwu disro na ngwa YaST iji hazie ya dịka sava dịka SAMBA, LDPA, Virtualization, network ect. ha zuru oke
(Naanị mpaghara nhazi ahụ anwalebeghị otú o si arụ ọrụ dịka sava)
ugbu a, m ga-wụnye ubuntu ọzọ wee hụ ụbọchị m ga-anwa ịnwale Arch
Etinyela Ubuntu .. Wunye OpenSUSE na Gnome ma edozi nsogbu :-). Lelee post m, ị ga - ahụ otu ọ dị mfe: http://www.taringa.net/posts/linux/13607221/Mi-OpenSUSE-12_1-_-_que-hacer-despues-de-la-instalacion_.html
Iri na atọ dijo
Ọ dị mma, ejirila m ya were awa ole na ole, emechabeghị m ịhazi ya, na ịnwale ya nke ọma, mana ọ bụrụ na emetụ isiokwu a ọzọ ma emechaa, aga m enwe ike ịgwa gị gbasara ahụmịhe m.
Zaghachi na iri na atọ
Obinna 127 dijo
Echere m na ihe niile sụgharịrị gaa na uto na ụzọ esi arụ ọrụ nke ọ bụla.
M na-eji OpenSuse n'ihi na ọ masịrị m na ọ na-enye nkwụsi ike, sọftụwia ọhụrụ karịa ule debian "kde maka atụ" na ịdị mfe nke iji. Ngwaọrụ na ịdị mfe nke OpenSuse na-enye m dịka ọkọlọtọ, ọ naghị, dịka ọmụmaatụ, nyocha Debian, obere Arch.
Anọ m na-ekwesị ntụkwasị obi nye Fedora ruo oge mbipute 15 + chọrọ 1 Gb iji wụnye / na-agba ọsọ, ekwesịrị m ịlaghachi Win2 ruo nwa oge na obere ihe karịrị 1 ọnwa gara aga na-anwale n'etiti ọtụtụ distros, achọtara m OpenSUSE na o doro anya na ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma N'agbanyeghị nwere 480MB (n'ezie enwere m 512MB) mana Linux ghotara m obere, na-agba ọsọ nke ọma ma na-agba ọsọ nke ọma na "Force alternate mode".
Ana m akwado ya, ọ bụ ezie na onye ọ bụla nwere mmasị ha.
Adị m ọhụrụ na ụwa nke Linux, emere m ule ahụ na nke mbụ ya na Ubuntu 11.10 na nkwanye nke otu enyi, nnukwu nsogbu bụ ndị ọkwọ ụgbọ ala nke kaadị vidiyo na wifi.
M gbanwere OpenSuse 12.1 ma dozie nsogbu m niile, echere m na ọ bụ nkesa Linux kacha mma.
eme 8 afọ
Da na-akpali m ga-anwale ya na ngwụsị izu a
"Pịa aka nri + Ziga Mgbakwunye na Thunderbird" na KDE
Zọ ọzọ ịgbanwe Chromium Agnye ọrụ